မသန့်ရှင်းတဲ့ လေထုကို ရန်ကုန်မှာရှုရှိုက်နေရပြီလား
30 ต.ค. 2562 - 14:56 น.
ရန်ကုန်မှာ မိုးနည်းလာတဲ့အချိန်နဲ့ ပူပြင်းလာတဲ့အချိန်ရောက်တာနဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုတွေလည်း ဖြစ်လာနေ တယ်လို့ လေထုတိုင်းတာရေးလုပ်ကြတဲ့ အဖွဲ့တွေထံက သိရပါတယ်။
ဒီနေ့ အောက်တိုဘာ ၃၀ရက်မှာတော့ အသင့်တင့် (အဝါရောင်) အဆင့်ကိုပြန်ရောက်နေပေမယ့် ပူပြင်းလာ တာနဲ့အမျှလေထုညစ်ညမ်းမှုညွှန်းကိန်းကလည်း မြင့်လာတာကို တိုင်းတာချက်ရလာဒ်တွေအရ တွေ့မြင် ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သာကေတမြို့နယ်နဲ့ ဒေါပုံမြို့နယ်အကြား ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်းမပေါ်ကို ကားနဲ့ ဖြတ်မောင်းရုံနဲ့ပဲ ဘယ်သူမဆို အဲဒီလိုအနံ့ကိုခံစားရတယ်လို့ မဖြူဖြူဇင်က ပြောပါတယ်။
ပွင့်လင်းရာသီရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကောင်းကင်က မှုန်အုံ့အုံ့ ပုံစံရှိနေတာကို မြို့အဝင် မြစ်ကူးတံတားဖြစ်တဲ့ မဟာဗန္ဓုလတံတားပေါ်က တဆင့် နေ့စဉ်မြင်နေရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် တံတားပေါ်ကနေ ပုဇွန်တော်မြစ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မှုန်ပြပြကောင်းကင်နဲ့ တွဲလျက်သားရှိတဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းကိုအမြဲလိုမြင်နေ တွေ့နေကျဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါ့အပြင် ရန်ကုန်ရဲ့လေထုညစ်ညမ်းမှုက များပြားလာတဲ့ မော်တော်ယာဉ်အရေအတွက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်တာရယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လမ်းတံတားတွေ သန့်ရှင်းမှု နည်းပါးတာတွေကြောင့်လည်း လေထုညစ်ညမ်း မှုတွေဖြစ်နေတာလို့ သူကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မသန့်ရှင်းတဲ့ လေထုကို ရန်ကုန်မှာရှုရှိုက်နေရပြီလား